Ubuhlungu benyosi njengendlela yokwelapha umdlavuza nengculazi - i-Afrikhepri Fondation
ngomgqibelo, may 15, 2021
Inyosi ye-bee njengokwelashwa ngokumelene nomdlavuza ne-AIDS
Isihlungu sezinyosi njengokwelapha komdlavuza nengculazi
Lhees impela izinambuzane ezesabekayo. Siyayazi indima yabo ekupholiseni impova, noma izinzuzo eziningi zemikhiqizo yezidleke zabo. Kepha asikaze sicabange kuze kube manje ukuthi ubuthi babo bungasetshenziselwa ngisho nokulwa nomdlavuza. Futhi nokho.
Ithimba labaphenyi abavela eNyuvesi yase-Illinois eliholwa nguProfesa Pan Dipanjan liphumelele ekuvimbeni ukuphindaphindeka kwamangqamuzana omdlavuza ngokujova ubuthi bezinyosi kumaseli akhulile. Ngokuqondile, basebenzisa ubuthi obuphuma ku-venom obuqukethe iphrotheni, i-melittin, ekwazi ukunamathisela kulwelwesi lwamangqamuzana omdlavuza futhi ngaleyo ndlela isebenze njenge-agent ye-tumor. Umsebenzi wabo wethulwe ngoMsombuluko, Agasti 11 kuwebhusayithi yeAmerican Chemical Society.
Bakhele i-melittin ngomjovo kuma-nanocapsules aklanyelwe ukukhulula iphrotheni kuphela ngesikhathi esifanele lapho befinyelela ku-tumor.
Ubuthi esibukhiqizile buhlanganiswe kahle ngaphakathi kwe-nanoparticle kangangokuthi ngeke buphume uma busegazini, ”kuchaza uPan Dipanjan, umbhali oholayo wocwaningo.
Iqhinga elizogwema ubungozi bemiphumela emibi (ukulimala kwemisipha noma kwemizwa, ngisho ukuphuma kwegazi kwangaphakathi) uma kwenzeka ubuthi obuphuma ebuthi buyadedelwa bungene egazini.
Imiphumela yezivivinyo yethulwa njengeyanelisa kakhulu ngabaphenyi. Ngempela, i-melittin ayizange ibangele noma yimiphi imiphumela emibi. Ngaphezu kwakho konke, isakhi sobuthi sihlonyelwe ngqo kumaseli womdlavuza, ngaleyo ndlela kumise ukukhula kwawo nokusabalalisa.
Iqembu lokutadisha manje lihlela ukuhlola inkomponi ezilwaneni nokuthi imiphumela iyatholakala yini kubantu, kungakapheli iminyaka emihlanu.
Ama-nanoparticles aphethe ubuthi obutholakala ku-venom veny angabhubhisa igciwane lengculazi lomzimba (HIV) ngenkathi eshiya amaseli azungezile engenamyocu. Ucwaningo lwenziwe yiWashington University School of Medicine eSt. Ama-nanoparticles athwala i-melittin, okuyiyona nto eyinhloko ebangela ubuthi bezinyosi. IMelittin ixubana negciwane le-HIV futhi ibhubhise igobolondo layo lokuvikela wonke ama-bumpers wamangqamuzana avimbela ama-nanoparticles ekulimaleni amaseli omzimba ajwayelekile. Ubuthi bezinyosi baziwa ngokucekela phansi amaseli ezimila.
Ubuthi bezinyosi buqukethe ubuthi obunamandla obubizwa ngokuthi i-melittin obungaxosha izimbobo emvilophini evikelayo ezungeze i-HIV, namanye amagciwane. Inani elikhulu le-melittin yamahhala lingadala umonakalo omkhulu. Ngempela, ngaphezu kokwelapha i-anti-virus, umbhali omkhulu wephepha uSamuel A. Wickline, MD, uJ.
Ucwaningo olusha lubonisa ukuthi i-melittin elayishwe kula ma-nanoparticles ayilimazi amaseli ajwayelekile. Lapho ama-nanoparticles ahlangana namaseli ajwayelekile, amakhulu kakhulu ngosayizi, izinhlayiya zimane zivele. Ngakolunye uhlangothi, i-HIV incane kakhulu kune-nanoparticle, ngakho-ke i-HIV ingena phakathi kwama-bumpers futhi ihlangana nengaphezulu le-nanoparticle, lapho kulindelwe ubuthi bezinyosi.
Iningi lemithi elwa negciwane lesandulela ngculaza livimbela ikhono legciwane ukuziphindaphinda. Kuyisu lokulwa nokuziphindaphinda elingenzi lutho ukunqanda ukutheleleka, futhi izinhlobo eziningi zegciwane zithole izindlela zokudlula le mithi futhi ziqhubeke nokuzala. Njengoba kunikezwe lokhu okutholakele, ijeli lesitho sangasese sowesifazane ingasetshenziswa ezindaweni lapho i-HIV ibaluleke khona. Ingasetshenziswa njengendlela yokuvimbela ukuvimbela ukutheleleka kokuqala nokuvimbela ukusabalala kwe-HIV. Ucwaningo lobuthi bezinyosi ze-HIV lushicilelwe ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kulo magazini Ukwelashwa Kwe-Antiviral.
Bangaphezu kwezigidi ezingama-34 abantu abaphila ne-HIV / AIDS emhlabeni wonke, kanti abangaphezu kwezigidi ezintathu kubo bangaphansi kweminyaka eyi-3. Nsuku zonke, izinkulungwane zabantu zithelelwa i-HIV emhlabeni jikelele.
Kubalulekile futhi ukuqaphela impikiswano ephathelene ne-HIV ne-AIDS. Imiphumela ikhombisa ukuthi abukho ubufakazi obuqinile besayensi obukhona namuhla bokufakazela ubukhona be-HIV. Ingculazi nayo inengxoxo enkulu njengoba kwamanye amazwe ibonwa njengento eyodwa kanti kwenye yinto ehluke ngokuphelele. Ungathola ukuthi une-AIDS ngokoqobo ezweni elilodwa kodwa hhayi kwelinye. Ingculaza imvamisa iyigama lesambulela ESIKHULU sezifo ezingaba khona. Okuwukuphela kwesici esivamile esitholakala phakathi kwezincazelo ukuthi ngabe isibalo somzimba esingu-T sehla ngaphansi kwezinga elithile. Kungani kunokwehluka okungaka mayelana nokuthi iyini ingculaza ngempela? Kungani izincazelo eziningi kangaka ezingafani?
“Ngenxa yokuthi wayezungezwe imizwa eningi, bambalwa kakhulu abantu abakwazi ukubheka ingculazi ngokunengqondo. "
- UMark Gabrish Conlan, umcwaningi ngengculazi
“Uma kunobufakazi bokuthi i-HIV idala ingculazi, kufanele kube khona imibhalo yezesayensi eyikhombisa noma nguyedwa noma ngokuhlanganyela, okungenani ngamathuba amakhulu. Awukho umbhalo onjalo. "
- UDkt. Kary Mullis, Isazi samakhemikhali ezinto eziphilayo ngo-1993, umklomelo kaNobel ekhemistry.
“Kuze kube namuhla, empeleni abukho obunye ubufakazi obuqinisekisayo besayensi bokuba khona kwe-HIV. Akukaze kube kanye i-retrovirus enjalo ihlukanisiwe futhi yahlanzwa ngezindlela ze-virology yakudala ”.
- UDkt Heinz Ludwig Sanger, uProfesa wase-Emeritus we-Molecular Biology kanye ne-Virology, iMax-Planck-Institutes of Biochemistry, Munchen.
"… Esikhundleni sokuzama ukufakazela ontanga yakhe imibono yakhe yokuhlanya ngengculazi… waphumela obala. Kwathi ngosizo lukaMargaret Heckler, owayeyinhloko yezeMpilo noHulumeni, owayengaphansi kwengcindezi enkulu yezepolitiki yokuthola impendulo nge-AIDS, isimemezelo esibi sokutholakala kwaleli gciwane esaziwa ngokuthi I-AIDS global press ifikile. Lo mkhonyovu omkhulu manje usuyimbangela yokufa kwamakhulu ezinkulungwane… Akusikho ngengozi ukuthi uGallo uvele nje wenza ilungelo lobunikazi lokuhlolelwa i-HIV, ngosuku olulandelayo ngemuva kwesimemezelo… UGallo manje usengusozigidi omkhulu ngenxa Ingculazi nokuhlolwa kwayo okukhohlisayo kwe-AIDS. "
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ukuqonda okuphelele nge-HIV eyedwa nokuba khona kwayo akukaze kufinyelelwe emkhakheni wezokwelapha. Phakathi komphakathi wesayense le mpikiswano ibineminyaka eminingi ikhona futhi kubalulekile ukuthi sigcine umqondo ovulekile ngale ndaba njengoba kwenziwe ucwaningo oluningi kuyo.
IBeverly Hills - V-Lift Bee Venom Instant Ukuvuselela i-Eye Serum yi-MD3 ...
Ukhilimu Olwa Umbimbi ne-Bee Venom Api-Nature
Thenga i- € 35,00
Kugcine ukubuyekezwa ngoMeyi 14, 2021 10:18 PM
Incwadi yabafileyo baseGibhithe lasendulo (PDF)
Lokho ongatshelwanga ngakho ngoNkulunkulu ngokomoya wangempela wase-Afrika
Izeluleko ze-14 zokushintsha impilo yakho (Ividiyo)
Ama-Savages, enhliziyweni yama-zoo womuntu - I-Documentary (2020)
I-Epic yeGilgamesh (PDF)